Golaha baarlamaanka oo ku wareesan in shirka dib u heshiisiinta ee guddoomiye Cali Mahdi yahay mid lagu heshiisiinayo beelo ama mid dhex maraya dowladda iyo mucaarad, iyo guddiga maaliyadda mudanayaasha baarlamaanka oo doonaya in ay dowladda kala xisaabtamaan dhaqaali soo galay iyo meesha ay ku dambeysay kadib markii ay soo bexeen in la lunsaday haatanna la hormarsaday canshuuriyii laga qaadi lahaa dekedda Xamar iyo warar kale. Ruunkinet 20/05/07
Golaha baarlamaanka ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa la sheegay in ay ku wareersan yihiin sida ay ka yeeli lahaayeen shirka dib u heshiisiinta ee la sheegay in uu guddoomiye ka yahay mudane Cali Mahdi Maxamed.
Golaha oo laga codsaday in ay ansixiyaan shirweynaha ayaan weli kala ogeyn in shirkaasi uu u dhexeeyo beelo ama dowladda iyo macaarad.
Mudane Cali Mahdi Maxamed ayaa horey u sheegay in shirweynaha lagu heshiisiinayo beelaha Soomaaliyeed taasoo ay golaha baarlmaanka u arkaan mid ay dowladda shaqo ku lahayn haddii ay sidaasi tahay.
Dhanka kale, guddiga golaha baarlmaanka u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha ayaa la sheegay in ay doonayaan in ay kala xisaabtamaan dowladda halka la mariyay dhaqaalihii ay dowladda heshay.
Sidoo kale, gudigan ayaa la sheegay in ay la yaabeen markii ay maqleen in ay dowladda ka hormarsatay lacago badan ganacsatada keenta badeecadaha kala duwan dekedda Muqdisho muddo halsano ah oo aan wax canshuur ah laga qaadi doonin ganacsatan.
Warar aan la xaqiijin ayaa sidoo kale sheegaya in lagacago been abuur ah la dhigay guryaha madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha ay degan yihiin taasoo loogu talagalay in mushaaro loo siiyo ciidanka dowladda ayadoo lacagahaasi lagu sarafaya doolarka mareykanka.
Lacago aad u badan ayaa la aaminsan haya in qaar ka tirsan mas'uuliyiinta dowladda ay lunsadeen.